Civil 3D, uyilo lwendlela, isifundo 2 -I-Geofumadas
Ikhaya/AutoCAD-AutoDesk/I-3D yabasebenzi, isakhiwo seendlela, isifundo se-2
I-3D yabasebenzi, isakhiwo seendlela, isifundo se-2
Kwithuba langaphambili sibone indlela yokungenisa amaphuzu, ngoku siza kubona indlela yokubacoca ukuze babe nombono ongcono wento esinayo. Amanqaku sinawo ezi zinto zilandelayo:
Emva koko abanye abananto, ke siya kuthatha ukuba yindawo yendalo kwaye kukho amanqaku e-axis esembindini eboniswe ngezikhululo 0 + 000 0 + 10, 0 + 20 ... de ifike ku-0 + 650
Yenza ngokwezifiso iingcingo zomcingo
Into abayifunayo ukubonisa uhlobo amanqaku kuxhomekeke iimpawu zazo etafileni, ngoko ke iqela leendawo senze okulungileyo uze ukhethe "New".
Emva koko siyakubiza ngokuba yi "Fence" kwaye siza kuhlela iipropati zepotayiti (isitayela segama) ukudala isitayela esitsha ukulungiselela oku kulandelayo:
"Ulwazi" siya kuthiwa "Cerco"
Kwi "Marker" siya kukhetha i X
Kwi "Bonisa" siya kutshintsha umbala kwi-orange
Emva koko senza "Yamkela"
Senza okufanayo kunye nelebula (isicatshulwa lesimboli), kuphela ukuba kule ngxaki sifuna ukuba umbhalo ungabonakali kwaye:
"Ulwazi" silibiza ngokuthi "i-Cerco ilebula"
Ku "Layout" sikhetha "inombolo yenqaku", "Inkcazo yeNqaku" kunye "neNqaku lokuphakama" bubuxoki. Umbala unokutshintshwa kwalapho.
Ngoku ukuba ucele ukuba le ndlela isenzeke kwi-seins seins, sikhetha "Faka" ithebhu okubhaliweyo iqulethe igama elithi 'ucingo', uze ukhethe 'isicelo' kwaye ahlole i "kuluhlu Point" isithuba ukuba zonke izinto equlethe loo nkcazelo.
Emva koko senza okulungileyo kwaye siya kubona ukuba onke amanqaku ocingo ane-X yombala we-orange njengoko sikuchazile.
Senza okufanayo kunye "UKUHLA" lesiphumo, kulo mzekelo kuzakunika ruedita oluhlaza, kwaye kuza kwenza amagama, ukuphakama kunye nenombolo ifihliwe.
Ukuze sibone ukutshintsha kwethu sivuselele ngo "re" kwaye "ngene".
Ukuba inyathelo langaphambili libiza, ngoku ngoku kufuneka uzame ukubuyisa umhlaba, yindlela efanayo yokuqala, ukudala isitayela esithile kwimiba nganye yamaphupha.
Kwimeko yesikhewu ndiza kusebenzisa umbala oluhlaza, njengophawu lwesikwere kwaye ngaphandle kwenkcazo. Iibhloko zinokusetyenziselwa oku, kodwa ayisosihloko sengxoxo samhlanje.
Amaphuzu endalo yemvelo.
Ngenxa yoko, siza kukhetha ukhetho olukhethekileyo, kule meko kungekhona "ukubandakanya" kodwa "ukungabandakanyi", ukubeka oku kulandelayo:
I-SLIDER, IBRECHA, iCERCO, i-0 +
Oko kuthetha ukuba zonke iingongoma ezingenayo nayiphi na inkcazo yenkcazo efana nale iyahamba, phawula ukuba owokugqibela uchazwa kwisinyathelo esilandelayo.
Kulo msebenzi umele ukhangele oku:
Iingongoma ze-axis ephakathi
Kwimeko, into esenzayo "iquka", ngokubeka i-0 +
oku kuthetha ukuba zonke izitishi ezinokuthi, kunye nomqondiso kunye nayiphi na enye impawu ziya kukhethwa. Kwaye oku siya kunika uphawu olungakumbi, siya kushiya kubonakala kuphela kwisikhululo kunye nokuphakama.
Ndiyaqonda ukuba ukwenza umntu oyigqiba ufanele uhlawule, kodwa yindlela yokubonisa, ukuguqula iipropati ukuba wazi oko kuguqulwa. Ekugqibeleni kufuneka kubonakale njengale:
Ungayikhathaleli le nto, kodwa ndicinga ukuba iyakubiza kamva Apha unokukhuphela ifayile ukuya phambili ekhokelela kuyo. Njengoko ubona, ungasusahlulahlula udidi lokubamba kwisitishi esipheleleyo.
I-3D yabasebenzi, isakhiwo seendlela, isifundo se-1
I-3D yabasebenzi, yenza ukulungelelaniswa (isifundo se-3)
Akukho sidingo sokubonga uPablo, le ngcamango kukuba ukwabelana ngolwazi kusinceda sikhule kwaye siphonononge ngakumbi.
Isifundo KAKUHLE KAKHULU ungumfundisi ENKULU, Enkosi igalelo UNCEDO Enkulu luck PHAMBILI uNkulunkulu akubusise.
Eyona nto imnandi kakhulu, andiyazi oku ngokuqhelekileyo, elula kakhulu nge-didactic eninzi.
Ingcaciso yakho inhle kakhulu, qhubeka uhamba naye ,,,,
Gerardo Martínez uthi:
Inomdla kwizifundo ze-Civil 3d malunga neendlela. Ndiyabulela kakhulu ngenxa yegalelo lakho liya kuba luncedo.
Omkhulu ootitshala beklasi epheleleyo ye-CIVIL 3D, mhlawumbi omnye umntu ufunde i template enkulu kwaye angenza iminikelo
Ikhosi ezilungileyo AutoCAD ezamahala 2013